Juan Mata Oo Ku Biiraya Arsenal, Sanchez Oo Ka Tagaya United & Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Saaka Oo Sabti Ah | Laacib.net
Juan Mata Oo Ku Biiraya Arsenal, Sanchez Oo Ka Tagaya United & Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Saaka Oo Sabti Ah
10-11-2018 Saed Balaleti Comments Off on Juan Mata Oo Ku Biiraya Arsenal, Sanchez Oo Ka Tagaya United & Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Saaka Oo Sabti Ah
Maalin wanaagsan dhamaan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad dunida ka joogtaan, ku soo dhawaada warbixinta aan idiin kugu soo koobno waxyaabihii ugu waa weynaa ay wargeysyada Ingariiska ka qoreen suuqa kala iibsiga Saaka oo Sabti ah.
Suuqa kala iibsiga ayaa furmaya bisha Janaayo iyadoo kooxaha Yurub la filayo inay soo iibsadaan xiddigo ay isku sii xoojiyaan inta ka harsan xilli ciyaareedka, halka kooxaha qaar ay isha ku hayaan xiddigo ay doonayaan xagaaga danbe.
Xaquuqda wararka suuqa kala iibsiga waxaa iska leh warbaahinta ku hor qoran.
Weeraryahanka Manchester United iyo xulka Chile Alexis Sanchez oo 29 sanno jir ah ayaa doonaya inuu ka tago Old Trafford in ka yar sannad ka dib markii uu kaga soo biiray Arsenal, waxaana ugu wacan isfaham la’aanta asxaabtiisa kooxda, qalbi jabkii ka soo gaaray burburkii jaceylkiisa iyo weliba inuusan jeclsan hab maamulka Jose Mourinho. (The Times)
Xiddiga khadka dhexe ee Spain Juan Mata oo 30 jir ayaa si bilaash ah uga tagaya Manchester United xagaaga isagoo ku biiraya Arsenal islamarkaana noqonaya bedelka Aaron Ramsey. (talkSPORT)
Aaron Ramsey ayaa diirada u saaran kooxaha horyaalka Shiinaha, waxaana loo soo bandhigi doonaa qandaraasyo aad u qaali ah haddii uu si xor ah uga tago Arsenal. (The Sun)
Daafaca garabka ka ciyaara ee Man United 28 jirka Talyaaniga ah Matteo Darmian ayay u badan tahay inuu kooxda ka tago bisha Janaayo iyadoo Inter iyo Roma ay xiiseynayaan. (The Sun)
Manchester City iyo Barcelona ayaa muuqda kuwa seegaya saxiixa 19 jirka kooxda Ajax ee daafaca ah Matthijs de Ligt kaasoo ku dhow inuu u saxiixo Juventus. (Calciomercato)
Goolhayaha kooxda Liverpool Simon Mignolet oo 30 sanno jir ah ayaa waxa uu diirada u saaran yahay kooxda Faransiiska ee Nice oo uu tababare u yahay halyeeygii Arsenal Patrick Vieira. (Daily Mirror)
Liverpool ayaa beenisay wararka sheegaya in milkiilahooda John W Henry inuu doonayo inuu kooxda ku iibiyo in ka badan 2 bilyan ginni. (Daily Mail)
Dhaawaca soo gaaray Danny Welbeck oo la filayo inuu garoomada ka maqnaado inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ayaa waxa ay dedejin doontaa dalabka tababare Unai Emery uu 45 milyan ginni ku doonayo 23 jirka reer Ivory Coast ee kooxda Lille Nicolas Pepe. (The Sun)
Weeraryahanka reer Brazil Neymar oo 26 sanno jir ah ayaa la ogaaday inuu mushahar ahaan u qaato 900 kun ginni isbuucii, sida ay baahisay sir faafiyaha Football Leaks oo helay sirta qandaraaskiisa. (The Times)
Chelsea ayaa kula tartamu doonta dhowr kooxood oo Talyaani ah oo ay ku jirto kooxda Juventus saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Brescia Sandro Tonal oo lagu qiimeeyo 20 milyan ginni. 18 jirkaan ayaa durbaba lagu tilmaamay inuu yahay Andrea Pirlo cusub. (Goal)
31 jirka daafaca Juventus Mehdi Benatia oo ay xiiseynayaan kooxaha Manchester United iyo Arsenal ayaa ku si amaah ah ugu biiri kara AC Milan bisha Janaayo iyadoo qiyaar loo siinayo inay 15 milyan euro si toos ah kula wareegaan xagaaga danbe. (Sport Mediaset)